धुर्मुस–सुन्तलीलाई फेरि लाग्यो चितवनमा झट्का, रेणु–प्रचण्डलाई दिइन यी महिलाले तनाव (भिडियाे हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > धुर्मुस–सुन्तलीलाई फेरि लाग्यो चितवनमा झट्का, रेणु–प्रचण्डलाई दिइन यी महिलाले तनाव (भिडियाे हेर्नुस्)
धुर्मुस–सुन्तलीलाई फेरि लाग्यो चितवनमा झट्का, रेणु–प्रचण्डलाई दिइन यी महिलाले तनाव (भिडियाे हेर्नुस्)
admin February 5, 2020 भिडियो, समाचार	0
भरतपुर । चितवनकि नागरिक अभियन्ता एवम् अधिकारकर्मी तारा बरालले धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनलाई चन्दा नदिन अपील गरेकी छिन् ।बरालले आफ्नो फेसबुकमार्फत चितवनमा बन्दै गरेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका नाममा धुर्मुसले चन्दा आतंक मच्चाएको आरोप लगाएकी छिन् । नागरिक अभियन्ता बरालले रंगशालालाई दिइएको कृषि क्याम्पसको जग्गा फिर्ता गराउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हाल्ने तयारी भइरहेको बताएकी छिन् ।
अबैध रुपमा बन्दै गरेको रंगशालालाई आर्थिक सहयोग नगर्न उनले भनेकी छिन् । उनले रेणु दाहाल र प्रचण्डको राजनीति बचाइदिन धुर्मुसले सस्तो लोकप्रियताका लागि रंगशाला बनाउन लागेको आरोप लगाएकी छिन् । प. दीनबन्ध पोखरेलले आफ्ना बुबा नारायणप्रसाद पोखरेलका हत्यारा माओवादीको उक्साहटमा रेणु–प्रचण्डलाई माफी दिन रंगशालाका नाममा लगाइएको महायज्ञमा बाचन गर्न आएको भन्दै बरालले आलोचना गरेकी छिन् ।
धुर्मुस अर्थात सीताराम कट्टेल प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको चुनावी प्रचारमा हिँडेका व्यक्ति हुन् ।सुन्तली अर्थात कुञ्जना घिमिरेकी आमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको उपमेयरमा माओवादीबाट उम्मेदवार बनेकी थिइन् । आमाको प्रचारमा सुन्तली हिँडेकी थिइन् । धुर्मुस–सुन्तली राजनीतिक रुपमा नेकपा निकटका हुन् । उनीहरू बेलाबेला बालुवाटार र खुमलटार पुगेर आशीर्वाद लिन्छन् भन्ने आरोप छ ।
तारा बरालले फेसबुकमा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अशंकधुर्मुसले चितवनमा बन्दै गरेको रंगशालामा कसैले पनि पैसा नपठाउनु होला भनेर अनुरोध गर्नका लागि फेसबुकमा आएको छु । झट् सुन्दा मसँग हजुरहरूलाई रिस उठ्छ होला । तर, मैले हजुरहरूलाई कारणसहित बताउँदै छु । त्यो रंगशालामा लगाएको पुराणमा र अरु कुनैपनि माध्यमबाट कुनैपनि संघ संस्थाहरूले त्यहाँ पैसा नफसाउनु होला । कारण, त्यो जग्गामा मुद्धा लाग्दै छ । त्यो रंगशाला गैह्रकानूनी रुपमा बन्दै छ । हाम्रो पहिलादेखिको अभियान के छ भने सरकारी जग्गाको दुरुपयोग गर्न सरकारलाई नदिने ।
रामपुर कृषि क्याम्पसको जग्गा भनेको पहिला देखिनै नेपालभरिको ९५ प्रतिशत कृषिमा निर्भर रहेको अर्थतन्त्रको मुटु हो । त्यहाँबाट नयाँ नयाँ बीउ, बालीहरू अनुसन्धान गरेर देशभरिका किसानलाई बीउ बालीमा सहयोग गर्नुपर्ने जमीनलाई आज त्यो जमीन एउटा प्रचण्डका सन्तानले जित्दैमा कृषिमा रंगशाला बन्न पाउँदैन । त्यो रेणु दाहालको बाउको निजी सम्पत्ति होइन । केपी ओलीको निजी सम्पत्ति होइन । त्यो सारा नेपालीको बराबर अधिकार लाग्ने विषयवस्तु र नेपाललाई अहिले उनीहरूले पूर्ण रुपले विदेशी कृषिमा आधारित बनाएर भारत, अमेरिकाको बीउ नेपालमा छ्यापछ्याप्ती ल्याइदिने ।
नेपालमा एउटा अन्नको बालो फल्न नदिने त्यो गर्दै गर्दा अहिले रामपुर कृषि क्याम्पसको एक्काइसौँ बिघा खेल मैदानका लागि दिएको छ । यो पूर्ण रुपमा गैह्रकानूनी छ । हामी मुद्धामा जाँदै छौँ । मुद्धाको फाइल तयारी भइसकेको छ । धुर्मुसलाई पटक पटक के भनिएको छ भने – तपाईले राजनीति गर्न त खोज्नु भएको होला । तपाईले आफ्नो विज्ञापन गर्न खोज्नुभएको होला । राजनीति र विज्ञापन गर्ने पनि सहि तरिका हुन्छ नि ।
तपाईले समाज सेवा गर्दाखेरी सरकारको पैसा लगेर गाउँका जनतालाई बाँडिदिनेकी जनताको पैसा उठाएर सरकारी काम गरिदिने ? सरकार र नेताहरूलाई काम गरिदिने ? म तपाईलाई प्रश्न पनि गर्छु कि तपाईका कहिँ पनि तपाईका सस्तो लोकप्रियताको आँशु झार्नु पर्दैन । सरकार मरेको छ ?रेणु दाहाल र प्रचण्डको जिल्लामा सरकारको काम गर्नका लागि दुनियाँ नागरिकहरूलाई चन्दा आतंक किन मच्चाउँदै हुनुहुन्छ तपाई ?
रेणु दाहाललाई पनि मैले के भनेको छु भने – हामी खोजी गर्दै छौँ । जिल्ला प्रशासनका कर्मचारी, जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारी, क्यान्सर अस्पतालका कर्मचारी, अस्पतालका कर्मचारीदेखि लिएर हरेक विद्यालय, कलेज, बोर्डिङका कर्मचारी शिक्षकबाट चन्दा आतंक गरेर आफसे आफ तलब कटाइदिएको छ । महिना महिनाको तलव कटाइदिएको छ । तपाईको मनपरी हो रेणु जी सक्नु हुन्छ भने सरकारबाट लगानी गर्नुस् । सक्नु हुन्न भने तपाईको विज्ञापनका लागि जनता भोका नाङ्गा राखेर पैसा उठाउन पाउनु हुन्न ।
धर्मले केही पनि गर्दैन । यसलाई सिध्याइदिनुपर्छ । यशुले सबै समाज सेवा गर्ने भएर म क्रिश्चियनमा लागेको भनेर तपाईको बुबा प्रचण्डले भोट मागेको भिडियो मसँग छ । म सार्वजनिक गरिदिउँला । हिँजो तपाईलाई फाइदा उठाउने बेलामा क्रिश्चियनकामा जाँदा ईण्डियाले पालेर बसिदिँदाखेरी नेपालका १७ हजार मान्छे काट्दाखेरी तपाईहरूलाई ईण्डियाले पालेको हामीलाई थाहा छ । तपाईहरू नेपालका लागि हो कि ईण्डियाका लागि हो भनेर । नेपालीहरूलाई मार्न ईण्डिया बसेका बेला धर्मले हिन्दुले सबै मास्यो भनेर यहाँको हिन्दु राष्ट्र विश्वको एक मात्र हिन्दु
राष्ट्र नेपाल भनेर गिनिज बुकमा लेखिएको नाम मेटाउने तपाईलाई आज किन पण्डितको मुख बेचेर पैसा कमाउनु परेको छ ? तपाईलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु कि म – आज पण्डितको मुख बेचेर तपाईको शिलालेखमा नाम लेख्नु परेको छ । नेताहरूले राजनीति कसरी गर्दै छन् ? धुर्मुसले पनि बुझ्ने कि ? उद्घाटनको दिन नेता, समापनको दिन नेता, शिलालेखमा नेता, पैसा जति जनताको आम्दानी जति नेताको ।
धुर्मुसले अर्को के जिम्मेवारी लिनुपर्छ भने यदि जनताको आम्दानीबाट त्यहाँ रंगशाला बन्छ भने त्यहाँको आम्दानी पछि जनताले लिन पाउनुपर्छ । जनताको सेयर हुन्छ त्यहाँ । सरकारले लिन पाउँदैन । रंगशालामा प्रावधानहरू के–के छन् भनेर बुझ्दै नबुझेर नाम लेखाउनका लागि, होला भोली तपाई कुनै राजनीतिक दलमा चर्चित भएपछि फ्याट्ट मन्त्री पाउनु होला । तर, त्यो हामी सबैको सरोकारको विषय होइन । समाज सेवा गर्नु हुन्छ भने सरकारको सम्पत्ति ल्याएर जनतामा बाँडिदिनुस् त्यो हुन्छ समाज सेवा । सरकारको काम, नेताको काम, नेताको विज्ञापन, तपाईको विज्ञापन गर्नका लागि चन्दा आतंक मच्चाउन पाउनु हुन्न । यो कुरा पूर्ण रुपले बन्द गर्नु होला ।
दीनबन्धु पोखरेलज्यू, तपाईले कतै राणाकालमा जस्तै बाबु मरेपछि मेरो पालो आउँछ भनेर बाबु मारेको त होइन ? भन्ने प्रश्न हाम्रा छातीमा जागेको छ । तपाईका बुबा नारायण पोखरेलका हरेक शब्द र वाणीले हाम्रो मुटु चस्स घोच्छ । शब्द शब्दमा हाम्रो आँशु आउँछ । तर, आज तपाईका बाबुलाई जसले गोली ठोकेर मार्‍यो । प्रचण्ड तिनकै सन्तानको ईतिहाँसमा शिलालेख लेखिदिनको लागि आज तपाईले पुराण भनिदिनुपर्छ ?
हिन्दु राष्ट्र मासिदिने यिनै होइनन् ? हिन्दुहरूले केही गर्दैनन् भन्ने यिनै होइनन् । पण्डितहरू टपरे हुन् यिनहरूले केही पनि गर्दैनन् यिनीहरूलाई काशि जा भन्ने यिनै होइनन् ? जातजातिलाई उचालेर लडाउने यिनै होइनन् ? आज तिनकै सेवक उनले त खोज्छन तपाईलाई निहुराउनै खोज्छन कि कसरी हुन्छ हिजो प.नारायण पोखरेललाई मारेको पाप उनीहरू कटाउनका लागि तपाईलाई निहुराउन खोजेका छन् । तपाई निहुरिन सुहाउँछ ? आफ्नो बाबुको पितृ श्राप तपाई लाग्छ कि लाग्दैन ? विचार गर्नु होला ।
हिजोसम्म हामीलाई हिन्दु राष्ट्र नेपाललाई चाहिन्छ गुम्यो । नेताहरूले खत्तम गरे भनेर सडकमा हिँडाएको ज्याला अब तपाईले हामीलाई दिनुपर्छ । तपाईले यसरी ल्याउनु हुन्छ हिन्दु राष्ट्र ? हाम्रो पहिचान हो त्यो भनेको छ । यिनै हिन्दु राष्ट्र मास्ने धर्मनिरपेक्षवादी नेताहरूको अण्डरमा तपाई पैसामा फसेर हुन्छ ? तपाईलाई पैसा चाहिन्छ भने हामी चन्दा उठाएर दिन्छौँ । तपाईले यो काम बिल्कुलै गर्नु हुँदैन थियो । तपाई नेपालका पण्डितहरूको कलंक बन्नुभएको छ । यो कुरा तपाई दीनबन्धु पोखरेलजीले विचार गर्नु होला । त्यो पुराणपछि तपाईलाई समाजमा, बाटाबाटामा, सडक सडकमा हामी प्रश्न उठाउने छौँ । तपाई दीनबन्धु पोखरेल कहाँ गएर बाँच्नु हुन्छ ? पास्टरसँग चर्चमा गएर तपाई बसे हुन्छ ।
धुर्मुसलाई पोहोर पनि त्यहाँ रंगशाला नबनाउ भनेर जानकारी दिएको हो । हामी मुद्धामा लान्छौँ । तर, मुद्धा किन ढिला भइरहेको भन्दा सरकारले सरकारी जग्गाको चरम दुरुपयोग गरेको छ । अहिले केपी ओली र योगेश भट्टराई मिलेर यती समूहलाई भएभरको जमीन दिएर सबै सिध्याइदिएका छन् । नेपालका सबैभन्दा धनी भनेका प्रचण्डको लगानी भएका भाटभटेनी, अनि ओलीको लगानी भएका यती । उनीहरूलाई दरबारमार्गको जग्गा खान पुग्यो । बालुवाटारको जग्गा खान पुग्यो । रोहिङ्ग्याहरूका दुई सय घरलाई ल्याएर काठमाडौंमा निःशुल्क जग्गा दिएर राख्न पुग्यो । नेपालमा एउटा रंगशाला बनाउनका लागि किन कृषि क्याम्पसकै जग्गा चलाउनु प¥यो ? किन अरु जग्गा दिइएन ? त्यहाँ छ हाम्रो प्रश्न ।
यो प्रश्न हामी अदालतभित्र ठड्याउने छौँ । सबै नेताहरूदेखि लिएर सबै प्रध्यापकहरूलाई अदालतमा ठड्याएर न्यायाधीशको अगाडि हामी प्रश्न मात्रै भए पनि गर्न चाहन्छौँ । त्यहाँका प्रध्यापकलाई खेतीबालीका लागि छुट्याएको जमीन क्रिकेट मैदान बनाउ भनेर दिएको हो कि नयाँ कृषि बीउबाली अनुसन्धानका लागि दिएको हो ? त्यहाँका प्रध्यापक भनेका सबै राजनीतिक दलका ठालुहरू हुन् । तिमीहरूले राजनीति गरेर नेताहरूले उठबस गराउँदा यहाँ आएर जमीन बाँड्नका लागि जागिर दिएको हो कि तिम्रो जागिर भनेको उचित शिक्षा र कृषि अनुसन्धानका लागि हो ? यसको जवाफ अदालतमा दिनु अहिले हामीले उत्तर खोज्दैनौँ ।
योगेश भट्टराईहरू त्यो पाथीभराको जग्गा, रोहिङ्ग्याहरूलाई बस्न जताततै दिन फालाफाल छ । विदेशीलाई दिन पुग्छ । रामदेवलाई नेपालमा कलकारखाना खोल्न जग्गा दिन पुग्छ । नेपालमा क्रिकेट मैदान बनाउन रामपुर कृषि क्याम्पसकै जग्गा किन बाँडियो ? किन दियो भन्दा नेपालबाट कृषि अनुसन्धानको शिक्षा नष्ट गरिदिनका लागि । ईण्डियाले पालेर राखेका नेताहरू बचाउन र आफ्नो सस्तो लोकप्रियताका लागि चन्दा आतंक मच्चाउनु भएको छ धुर्मुस यसलाई रोक्नुस् । सर्वोच्चले रंगशाला नभत्काउन भनेछ भने पनि, यो सत्ताको अन्त्य हुने अवस्थामा छ । यी नेताहरू सत्ताको भरमा मात्रै बाँचेका छन् । जनता एउटा पनि साथमा छैनन् । अब आउने चुनावमा नयाँ सरकार फेरिने ८० प्रतिशत प्रवल सम्भावना नेपालमा भइसकेको छ ।
दशदेखि वीस वर्षको अवधिमा शासन सत्ता फेरिएर गएको छ । अर्को सत्ता आउनेवित्तिकै रामपुर कृषि क्याम्पसको जग्गा बाली अनुसन्धानमा नै प्रयोग हुन्छ । जति सुकै अरबको लगानी भएपनि त्यो रंगशाला फुट्छ । हामी जग्गा साट्न दिँदैनौँ । अदालतमा जाँदा जग्गा साट्ने कुरा आउला । किन दिँदैनौँ भने नेपाल बैंकले भरतपुरको बाइपास रोडमा राजा महेन्द्रले कामचलाउका लागि दिएको सरकारी जग्गा अहिले नेपाल बैंकले त्यो बराबरको कहाँ हो कहाँ पाखाको जग्गा देखाइदिएको छ । छ करोड प्रतिकठ्ठा जग्गा बेचेर नेपाल बैंकले बेचेर खाइदियो । कृषि क्याम्पसको जग्गामा क्रिकेट मैदान बन्न पाउँदैन । बालीका लागि त्यो जमीन राम्रो छ ।
कसैले पनि क्रिकेट रंगशालामा पैसा नफसाउनु होला । देश विदेशको लगानी फसेर जान्छ । तपाईहरूको पसिना फसेर जान्छ । त्यहाँ वरीपरीकालाई फाइदा हुन्छ भनेर आश्वासन दिइएको छ । रंगशाला क्रिकेटको गेटका दुई घरलाई फाइदा हुन्छ । त्योभन्दा वरिपरी सबै बस्ती ओडारमा डुब्नेछ । एयरपोर्टका वरीपरीका बस्तीलाई कति घाटा भएको छ । गेटभन्दा वरीपरीकोले के पाएको छ ? रंगशाला वरीपरी कंक्रिटका पर्खाल लगाइनेछ । वरीपरीको घरहरूलाई ओडार बनाइनेछ । केही फाइदा हुनेछैन । खेलाडी आउँदा ठूलाठूला होटेलमा लगेर राखिन्छ । रेणुजी रंगशाला बनाउने हो भने अर्को जमीन देउ ।
गणेशथानको जग्गामा तिम्रा भोटका लागि सुकुम्बासी बसाल्ने । देवघाटका जग्गा व्यक्तिका नाममा पास गरिदिदै छौँ तिम्रा भोटका लागि । रेणुजी यस्तो सस्तो लोकप्रियताका लागि तिम्रो भोट आउने छैन । रेणका विरुद्ध हामी जाँदै छौँ । यो रंगशाला एकदिन भत्किनेछ । मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य ‘मह’ जोडीका बारेमा यहाँ नाम लिइन्छ । महले नेपालका लागि के चाहिँ गरेका छन् र ? उहाँहरू विज्ञापनका लागि पैसा कमाउन जहाँ पनि डुल्नु हुन्छ ।
विदेशीको विज्ञापन गर्ने बोहक मह जोडीले नेपाललाई के चाहिँ गर्नुभएको छ ? मह जोडीले नेपाली पैसा विदेश पठाउन विदेशी विज्ञापन खेल्नु भएको छ । ईन्स्योरेन्स, पाइप वा अन्य यस्तै विज्ञापन । हामी एउटा सेलिब्रेटीको पछाडि दौडिएर अन्धभक्त भएर कागको पछाडि कान लग्यो भनेर दौडिए जस्तै सेलिब्रेटी एक ठाउँमा आएर राम्रो भन्दा भित्र जेसुकै अर्थात बिष पोको पारेर त्यो बाहिरको टल्किने पोकालाई राम्रो मानेर किन कुद्छौँ ? भारतले एक दिन एक बोरा चामल नदिएको दिन हामीले के खाने ? खेती योग्य जमीन पनि सिद्धियो ।
बाली उत्पान सिक्ने ठाउँ पनि सिद्धियो । हाइब्रिडले घोघामा दाना लागेन, बालामा धान फलेन तर पनि तपाई हामीलाई क्रिकेट रंगशाला चाहिने ? रेणु दाहाल तिमी धर्मका नाममा यति पापी व्यक्ति हौ । बरपिपलका चौतारा नमासौँ न भनेर हामीले कति पहल गरियो । अन्त कतै पनि बरपिपलको चौतारा कतै पनि काटिदैन । तर उनले भरतपुरका चौताराहरू काटिन् ।
ल हेर्नुस् त यिनीहरूले बच्चा बोरामा हालेर चोर्दै…
दुई वटा सरकारी कार्यालयमा छड्के, कोही छैनन कार्यालयमा, कर्मचारी भन्छन–‘पानी पर्ला जस्तो भएर चाडै निस्केको’ (भिडियो सहीत)